Hojiin Sassaabbii Galii Bara 2009 Cimee kan itti fufu ta’uu dubbatame
Daldala Haqa Qabeessa
Daldalli seeraan alaa
Tilmaama galii guyyaa adeemsisuuf qophiin barbaachisu xumuramaa jira
Bara bajataa kana galiin birr bil 17fi mil 248 ol ta’u ni sassaabama
Rakkoolee bulchiinsa gaarii sektara galii keessatti mul’atan hundeerraa furuuf xiyyeeffannaan hojjetamuu akka qabu himame
Gibiraafi taaksii kaffaluun dirqama lammummaati
Bara bajataa kana galii birr bil 10.9 sassaabuuf karoorfame
Labsiin gibira galii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa lakk.74/95 waggoota 14 dura labsamee hojii irra kan ture ta’uun isaa ni yaadatama.
Labsiin kun yeroo dheeraaf hojii irra kan turee fi haala qabatamaa sochii dinagdee ammaa jiru waliin hojjachiisuu irratti fooyya’insi waan barbaachiseef,
Sadarkaa guddina dingdee biyyaa fi naannoo keenyaa wajjin walsimuu fi sirna bulchiinsa gibiraa hammayyaa’aa fi si’ataa ta’e diriirsuun waan barbaachiseef;
Sirni kaffaltii gibiraa haqa qabeessa akka ta’uu fi galiiwwan gibirri itti hin kaffalamne saaphana gibiraa keessa akka galan gochuun barbaachisaa waan ta’eef; wixineen labsii gibira galii fi bulchiinsa taaksii Mootummaa Naannoo Oromiyaa qofa qofaatti qophaa’uun mariin sadarkaa garagaraatti irratti gaggeeffamaa tureera.
Haaluma kanaan, wixineewwan labsii qophaa’an kana Caffeen Oromiyaa yaa’ii idilee Caffee 5faa, waggaa 2ffaa Bara hojii 5ffaa Gurandhala 23-24/2009 Galma Caffeetti taa’een sagalee guutuun mirkanesseera.
Labsiin gibira galii BMNO lakk.202 tumame kun galii waliigalaa waggaa (annual turnover threshold) kaffaltoota gibiraa sadarkeessuuf (segmentation) gargaaru fooyyesseera.
Labsii duraa irratti gabateen galii 4 (A, B, C, D) qofaa kan ture galiwwan gibira irraa bilisa ta’an tarreessuun gabateen E dabalameera.
Keewwatoonni bulchiinsa taaksii labsiwwan gibiraa/taaksii kanneen biroo keessatti hammatamuun bakka adda addaa waan turaniif hojii irra oolchuu irratti rakkoo uumaa tureera. Labsii haaraa bulchiinsa taaksii MNO lakk.203 jedhamee tumame kana irratti ammoo keewwatoonni bulchiinsa taaksichaa mirkaneessan haala iftoominaa fi bal’ina qabuun qofaatti waan tumameef hojii irra oolchuufis ta’ee olaantummaa seerichaa kabachiisuuf haala kan mijeessuudha.
Walumaagalatti, labsiwwan haaraa tumaman kun rakkoolee labsii duraan turee hiikuun maddi galii mootummaa akka babal’atu gochuun galiin mootummaa guddatee guddinni eegalame akka itti fufu kan taasisu, ijaarsi sirna bulchiinsa gibiraa akka dhugoomu, haqa qabeessummaan taaksii akka mirkanaa’u, kaffaltoota gibiraatiif haalli kaffaltii gibiraa akka mijaawu gochuun itti quufinsa tajaajilaa kan mirkaneessu waan ta’eef labsiwwan kun baay’ee murteessoodha.
Hojii irra oolmaa labsichaaf karaa caasaa Abbaa Taayitaa Galiwwan Oromiyaa sadarkaa sadarkaan jiruu gita hawaasaa hundaaf sadarkaa sadarkaan kallattii garagaraatiin hubannoon ni uumama.
Kaffaltoonnii gibiraas ta’ee hawaasni bal’aan carraa argamu hundaatti fayyadamuun labsii kana hubachuun hojii irra oolmaa isaatiif tumsa gochuun barbaachisaadha.